चाकू ब्लक - iSearch
सुरु घरेलू भान्सा उपकरण चक्कु ब्लक
1 धेरै अगाडी
2 किन एक knifeblock?
3.1 महंगी चाकू ब्लकहरूको फाइदा
3.2 महंगी चाकू ब्लकहरूको हानिकारक
4 चाकूको ह्यान्डल
5 यो के हो?
6 दायाँ चाकू ब्लक कसरी पत्ता लगाउने?
7 कति महंगी हुन सक्छ?
8 त्यसोभए तपाईले आफ्नो knifeblocks को व्यवहार गर्नु पर्छ
9 व्यावहारिक सुझावहरू
9.1 चोरीमा चाकू?
10.1 सफाई र हेरचाहको लागि छोटो
11 हामी के भन्न चाहन्छौं!
11.1 Knifeblocks मा निष्कर्ष
ठोस चक्कु ब्लकहरू काठबाट बनेको र प्रत्येक कामको सतहमा स्थिर रहन्छन्। सामान्य चक्कर ब्लकहरू ठूलो मात्रामा लैजान सकिन्छ। तिनीहरू प्राय: केही चाकू र कैंची हुन्छन्। एक भट्टराई पनि प्राप्त गर्दै र चाकूको तीव्रता सामान्यतया समावेश गरिएको छ। राम्रो चाकू एक मा चक्कु ब्लक सफापूर्वक प्रशोधन गरिनु पर्छ। साथै, सामग्री उच्च गुणस्तर र टिकाऊ हुनुपर्छ। दायाँ चाकू हातमा राम्रोसँग फिट हुन्छ र लामो समयसम्म तेज रहन्छ।
किन एक knifeblock?
हरेक भान्सामा पर्याप्त तेज चाकू हुनुपर्छ। त्यसैले तपाईं खाना पकाउन र आफ्नो खाना तयार गर्न सक्नुहुन्छ। यद्यपि, सामान्यतया यो चाँहि हो जुन चाकू गलत भण्डारण गरिएको छ। यदि तपाइँ यसलाई एक दराजमा राख्नुहुन्छ भने, चाँडो चाँडै हराउन सम्भव छ। तपाइँले आफ्नो प्रिय चाकू राखेर एक knifeblock मा राखेर यो जोगिनै पर्छ। यी विभिन्न मूल्यहरूमा धेरै डिजाइनहरूमा भेट्टाउन सकिन्छ। तुरुन्तै खरीदमा अधिलेखन गर्न सकिन्छ, किनकि बहुतायत धेरै छ।
एक knifeblock मा, तथापि, यो केवल चाकू आफैं, र पनि ब्लक नै सफा गर्न महत्त्वपूर्ण छैन। अब हामी तपाईंको लागि केही जानकारी तयार गरेका छौं। त्यसैले तपाईं आफ्नो भान्साको लागि सही चाकू ब्लक फेला पार्न सक्नुहुन्छ।
चक्कुहरू मानिसहरूको सम्झना पछि वरपरका छन्। यद्यपि पहिलो चाकू आजको मोडेलको तुलनामा पनि तुलनात्मक थिएनन्, उनीहरु निकै सामान्य थिए। चाकू अब कुनै पनि भान्सामा सोचेको छैन। लेम्यान साधारण चाकूसँग सन्तुष्ट छन्। Hobbyköche तथापि र पनि व्यावसायिक कुकहरूले एक राम्रो knifeblock संग उच्च-गुणस्तरको गुणस्तरमा धेरै राम्रो मूल्य राख्दछ। चक्कुहरू सामान्यतया प्रसिद्ध ज्ञात आपूर्तिकर्ताहरूबाट आउँछ र आन्तरिक रूपमा चयन गरिएको छैन।
महंगी चाकू ब्लकहरूको फाइदा
उच्च गुणस्तरमा निष्पादन
वजन वितरण चाकू एकदम सही छ
महंगी चाकू ब्लकहरूको हानिकारक
डिशवाशरको लागि उपयुक्त छैन
तपाईंले तिनीहरूलाई राम्ररी व्यवहार गर्नु पर्छ
इस्पात ब्लेड संग knifeblades को अतिरिक्त, आज एक सिरेमिक ब्लेड संग राम्रो विकल्प पनि छन्। ती ठूलो दबाबले ठूलो दबाइ र अत्यधिक गर्मीमा जलाइएको छ। सिरेमिक ब्लेड लामो तीव्र र धेरै हल्का हुन्छन्। सिमेमिक विरुद्ध एलर्जीनिक साबित भएको छ र जंगली प्रकोप होइन। तथापि, यहाँ एक ठूलो कमी पनि छ। यदि ब्लेड गिरिन्छ भने, ब्लेड तोड्न सक्छ।
आज लोकप्रिय पनि ह्यान्डस्कबाट चाकू ब्लेडहरू छन्। यी चक्कुहरू प्राय: जापानी चाकू फारममा राखिएका हुन्छन् र प्राय: हातद्वारा जाली गरिन्छ। यी चक्कुहरूको सामान्य अन्न हो, जसले रूख स्टम्पको सम्झना गर्दछ।
सामान्यतया प्लास्टिक वा काठबाट बनेको चकलेटबाट चाकूको लागि एउटा ह्यान्डल हो। तर त्यहाँ सबै फलामको चाँहिहरू पनि छन्। यसको अर्थ ह्यान्ड सहित सम्पूर्ण ब्लेड एक कास्ट मा जालीएको छ। प्लास्टिक सफा राख्न सजिलो छ। काठ को हैंडल को रखरखाव को आवश्यकता मा केहि अधिक छ। यद्यपि, तिनीहरू धेरै खरीददारहरूको पक्षमा छन्। तिनीहरू आफ्नो हातमा राम्ररी झूट गर्छन् र सामान्यतया लामो लामो समयसम्म। तथापि, सबै-फलाम बरु ठुलो हुन्छ। तथापि, समग्र वजन यहाँ विशेष प्रभावशाली छ, यसको मतलब छ कि चाकू सजिलैलाई निर्देशन गर्न सकिन्छ।
तपाईंले Zwilling Professional S Knifeblock जस्ता चाकूको छः भाग भाग चयन गर्नुभएको छ? त्यसपछि तपाइँ यस सेटमा पूर्ण5चाकू र कैंचीहरू फेला पार्नुहुनेछ। तपाईं एक सब्जी सेट, एक शेफ चाकू, एक लामो ब्लेड संग एक लामो ब्लेड, एक दाखिल चाकू र रोटी काटने को लागि एक नाउ चाकू पाउनुहुनेछ।
दायाँ चाकू ब्लक कसरी पत्ता लगाउने?
राम्रो छ यदि तपाई आफ्नो प्राथमिकताहरू जान्नुहुन्छ। तपाईंले चाँहि जान्नुपर्छ कि एक चाकू सधैं राम्रोसँग झूट बोल्नुपर्छ। यो पनि महत्त्वपूर्ण छ कि भारी चाकू उच्च गुणस्तरको सामग्री हो। तपाईं सधैं यो बाहिर जान सक्नुहुन्छ। ब्लेड ह्यान्डल गैर-पर्ची हुनुपर्दछ र बेशक, हातमा पनि राम्रो।
कति महंगी हुन सक्छ?
एक राम्रो knifeblock को अधिक लागत छैन। तपाईले 50 र 100 यूरो बीच ठोस चाकू ब्लक प्राप्त गर्न अपेक्षा गर्न सक्नुहुन्छ जुन तपाईंको भान्सामा ठूलो सहयोग हुनेछ। एक कुरा ग्यारेन्टी छ। तपाईंले निर्णय गर्नुभएको बेला तपाईंको नयाँ मोडेल निश्चित रूपमा प्रयोग गरिनेछ।
त्यसोभए तपाईले आफ्नो knifeblocks को व्यवहार गर्नु पर्छ
ब्लेड तेज, अधिक कमजोर यो हो। ड्रअरमा ब्लेड कहिल्यै भण्डारण गर्नुहोस्। चाँहिहरू सधैं प्रयोगको लागि तयार राख्न राख्न पनि उपयोगी छ। खुला भण्डारणको बारेमा राम्रो कुरा हो कि तपाइँ आफ्नो नयाँ knifeblock गर्व गर्व गर्व गर्व छ।
तेर्सो इन्सर्ट सुरक्षित छ र घर्षणबाट ब्लेडहरू सुरक्षित राख्छन्। ऊर्ध्वाधर घुसपैठ व्यावहारिक छन् किनभने ब्लेडहरू बन्द गर्न सकिन्छ र ब्लेडले जमीनमा झूट गर्दैन। यो पनि व्यावहारिक हुन्छ कि इन्सर्टहरू खुल्ला हुन्छन्। त्यसपछि कुनै पनि टुक्रा बिग्रियो। तथापि, यो तपाईं को लागी गलत नाली मा चक्कु स्लाइड गर्न अपूर्ण छ। त्यसैले तपाईं आफ्नो काम सतह खरिद गर्न सक्नुहुनेछ किनभने चाकू त्यसपछि बाहिर हेर्छ।
शानदार भन्दा बढी चाकू ब्लकहरू छन्, जसमा ब्रसेले इन्सर्टहरू छन्। यस अवस्थामा, तपाइँ सबै चक्कुहरू राख्न सक्नुहुन्छ र चाँहि विस्तार गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ, दुर्भाग्यवश, हानिकारक छ कि यी ब्रिस्टलहरू फेरि सफा गर्न सजिलो छैन। सफाईको लागि तपाईंले रचनात्मक हुनुपर्दछ र निश्चित डिग्री धैर्य छ। यसैले तपाईंले विचार गर्नुपर्दछ कि तपाइँ यो ब्लकलाई सामान्य काठमा मनपर्छ।
तर सम्भवतः यो तपाईंको लागि होइन र तपाईं चुम्बकीय पट्टीको लागि छनौट गर्दै हुनुहुन्छ? त्यसपछि तपाईंले जान्नुपर्छ कि तपाइँ पनि कार्यबन्चमा ठाउँ बचत गर्न सक्नुहुनेछ। तथापि, सिरेमिक चक्कुहरू यी स्ट्रिपहरू पालन गर्दैनन्।
यदि तपाईं आफ्नो चाकू तिम्रो साथ ल्याउन चाहनुहुन्छ र सबै ठाउँ चाहनु हुन्छ भने, एक चाकू जेब तपाईंको लागि उपयुक्त छ। यो तपाईंलाई धेरै चाँहिहरू एकअर्काबाट अलग राख्न अनुमति दिन्छ। दिमागमा राख्नुहोस्, तथापि, कि जुनसुकै थलो खोल्न यो जटिल छ। सामान्यतया ठाउँ पर्याप्त छैन, किनकि बैगले ठूलो ठाउँको आवश्यकता चाहिन्छ। धेरै मानिसहरु लाई यो केवल शर्मिला छ र यसैले ड्रिर को पकडने देखि एक सामान्य चाकू हो। यद्यपि, थलो सामान्यतया चाकू ब्लकको लागि राम्रो विकल्प हो।
Wsthof Kochkoffer Magnetboden le 7383-43cm TOP PRICEView
थैला चाकू ब्लक (खाली)
व्यावहारिक भन्दा बढी चुम्बकीय आधारसँग खाना पकाउने समस्या Wüsthof बाट एक चाकूको मामला हो। यो तपाईं सडकमा पनि साथ गर्न सक्नुहुन्छ। क्या तपाईं छुट्टी को घर मा छुट्टी को योजना बना रहे हो? त्यसपछि आफ्नो आफ्नै चाकू सूटकेसमा लिनुहोस्। यस अवस्थामा, तपाइँका चाकूहरू सुरक्षित रूपमा भण्डार गरिएका छन् र तपाईले उनीहरूको आगमन पछि सीधा प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। यो मामला बलियो र बलियो हो र तपाईंसँग लामो समयसम्म संगै हुनेछ।
अब यो एक उपयुक्त रेखांकन खोज्न को लागी हो। तपाईंले ग्लास, धातु वा ढुङ्गाको समर्थन प्रयोग गर्नुपर्दैन। समर्थन गैर-पर्ची हुनुपर्दछ र दृढतापूर्वक सतहमा आराम गर्नुपर्छ। राम्रो हुन्छ जब रबड फुट वा एक पर्ची प्रतिरोधी कोटिंग उपस्थित छ। काठको उत्तम विकल्प साबित भएको छ। यो चाकू तेज लामो रहन्छ। यसको अतिरिक्त, यो एंटीबैक्टेरियल हो। त्यसपछि त्यहाँ प्लास्टिकको सामग्री हो।
सफाई र हेरचाहको लागि छोटो
चाकू ब्लकबाट कुक चाकू सधैँ प्रयोग पछि तुरुन्तै खाली हुनु पर्छ। यो नम कपडामा पकाउन सकिन्छ। ब्लेडमा माथिबाट माथि किनारामा जानुहोस्। त्यसपछि एक पकवान लिनुहोस् र चाक सुकाइदिनुहोस्। चाँडै तीव्रता गुमाउन सक्छ दुर्व्यवहार गरिएको हुन सक्छ। अम्लीय खाद्य पदार्थ वा घर्षण र संक्षारक सफाई बारेमा ब्लेड को तीव्रता असर हो। सफाईको समयमा पिसाब एजेन्टहरू, धेरै तातो पानी र नुन प्रयोग नगर्नुहोस्।
तपाईंले ढोका कपडाको साथ काठ को हैंडल पनि सफा गर्नु पर्छ। सिङ्कमा तपाईले त्यस्तो चाकू बिर्सनु हुँदैन। यो काठको घातक हो।
चाकू ब्लक आफैले राम्रो डिटर्जेंट र पानी संग समय समयमा समय सफा गरिनुपर्छ। तीव्र रसायनहरू प्रयोग नगर्नुहोस्। साथै स्पंज खरिद गर्दा तपाईंको चाकूको ब्लक सफा गर्न होइन। ब्लकलाई सफाई पछि हवामा सुक्नुपर्छ। क्रिमको समय-समयबाट बङ्कहरू नि: शुल्क गर्नुहोस्।
Zwilling 35621-004-0 प्रोफेशनल एस चाकू ब्लक, बाँस, 7- पार्ट्स डिसप्ले
सामग्रीहरू: स्पिट र गार्नियर (10 सेमी), सार्वभौमिक चाकू (13 सेमी), शेफको चक्कु (20 सेमी), रोटी चाकू (20 सेमी), बहुउद्देश्यी कैंची (20,5 सेमी), चाकू ब्लक (बाँस), स्टार्पिing स्टिल (23 सेमी)
आइस कडा ब्लेड: अतिरिक्त स्थायित्व र जंग प्रतिरोधको लागि फ्रिओडर बरफ कडा ब्लेड
स्टेनलेस स्टील: जुम्ल्याहा विशेष पिघल Zwilling को लागि मात्र उत्पादन गरिन्छ। इस्पात असाधारण टिकाऊ र जंग प्रतिरोधी हुन अनुकूलित गरिएको छ
चाकूहरू उनीहरूको कालातीत तीन रिभेट डिजाइनद्वारा चित्रण गरिन्छ। ह्याण्डल र ब्लेड बीच निर्बाध संक्रमण को माध्यम बाट
चाकू ब्लक उच्च-गुणात्मक बाँसबाट बनेको छ र दुबै सुरक्षित र स्टाइलिश भण्डारण विकल्प प्रदान गर्दछ
दुर्भाग्यवश, यस प्रक्रिया धेरै मानिसहरूसँग गलत छ। यो सधैँ चाँहि एक पेशेवर द्वारा तीव्र गर्न को लागि सिफारिस गरिन्छ। त्यसोभए तपाईं अब धेरै रमाइलो गर्न सक्नुहुन्छ। पक्कै सिरेमिक्सको बनेको चाकूलाई असर गर्छ।
राम्रो चाकूको अवस्थामा, ती प्रत्येक दुई वर्ष तीव्र हुनुको लागि पर्याप्त छ।
हामी के भन्न चाहन्छौं!
नबिर्सनुहोस् कि चाकूहरू सधैं एक knifeblock मा तेज हुन्छ। सधैं चाकू रोक्नुहोस् बच्चाहरूबाट रोक्नुहोस् र यसलाई सही प्रयोग गर्न निश्चित हुनुहोस्। यस तरिकाले तपाईं घाइते हुन सक्नुहुनेछ।
Knifeblocks मा निष्कर्ष
चाकू ब्लक व्यावहारिक छन् र हरेक राम्रो भान्सामा छ। तपाईं तिनीहरूलाई प्रशोधन गर्न र प्रशोधन गर्न सक्षम हुनुहुनेछ। चाकू ब्लक फेला पार्न निश्चित हुनुहोस् जुन तपाइँका आवश्यकताहरू पूरा गर्दछ। धेरै राम्रो छ जुत्ताको चक्की ब्लकहरू। तपाईं बीच मूल्य खण्डमा चाकू ब्लकहरू रोज्न सक्नुहुन्छ र यो अफसोस हुनेछैन। महत्त्वपूर्ण कुरा यो हो कि तपाइँलाई आवश्यक सबै चीजहरू प्राप्त गर्नुहोस् र तपाईंको नयाँ चाकू ब्लकमा सही तरिका सेट गर्नुहोस्। चाकू ब्लक व्यावहारिक छ र सजिलै संग र छिटो सफा गर्न सकिन्छ। हामीले तपाइँलाई पनि वैकल्पिक विकल्पहरू विचार गर्न चाहन्छौं।
DEIK पेशेवर चाकू ब्लक चाकू सेट, १ p पीसी, स्टेनलेस स्टील शेफको चक्कु काठको ब्ल्क, कालो प्रदर्शनको साथ सेट
जर्मन स्टेनलेस विशेष इस्पात र ओक को चक्कु ब्लक देखि ठिक ब्लेड। नतिजाको रूपमा, यी चक्कुहरूसँग लामो समयको सेवा जीवन र राम्रो जंग प्रतिरोध छ
16-टुक्रा चक्कु: काठ ब्लक, 8 "महाराज चक्कु, 8" मासु चक्कु, 8 "स्टेनलेस sharpening स्टील, 8" कैंची,5"उपयोगिता चक्कु, 5" Santoku चक्कु,5"टमाटर चक्कु, 4,5" स्टेक चक्कु *6टुक्रा 3,5 "paring चक्कु ,3"paring चक्कु
पारंपरिक चाकू को विपरीत एक टुकडे देखि उत्पन्न। थकान-मुक्त कार्यको लागि कम वजन। चाकूहरू यांत्रिक सिद्धान्तहरूको अनुसार सन्तुलित हुन्छ।
एंटीबैक्टेरियल टेक्नोलोजी: ग्याँस व्यवस्थित गर्न सक्दैन, ब्याक्टेरियाको कुनै मौका छैन। वर्तमान वैज्ञानिक ज्ञान अनुसार सफा डिजाइन।
गुणवत्ता वार्षिकी: 100% नयाँ नयाँ उत्पादन बिना शर्त 30 दिन पैसा फिर्ता ब्याक गारंटी र2वारंटी
मैक युनिभर्सल चाकू ब्लक प्लेन काठ डिजाइन मा कालो, हटाउन योग्य प्लास्टिक सम्मिलित साथ कालो (कालो)
साधारण लकड़ीको डिजाइन र हटाउन योग्य कुन्स्टोफिन्सैत्ज्मा युनिभर्सल चाकू ब्लक। प्रत्येक भान्छामा एक आँखा क्याचर!
उच्च गुणस्तरको कारीगरी: महान, कालो लाहिएको काठ
सबै प्रकारका चक्कुहरूको लागि उपयुक्त: स्टेनलेस स्टील वा सिरेमिक, चाकूहरू प्रयोगद्वारा डुल्दैनन्
यो 6-7चाकूमा फिटिनेछ 24 सेमीको लम्बाइमा चक्कु ब्लकमा, तपाईंको भान्साको भाँडाहरूका लागि पनि
कालो प्लास्टिकले बनेको ब्रिस्टल घुसाउनुहोस्: स्वच्छ, गन्ध रहित, हटाउन योग्य, सफा गर्न सजिलो। उच्चतम प्रसंस्करण गुणवत्ता र उत्कृष्ट अप्टिक्सले यस भोजलाई तपाईंको भान्छाको घरको मुख्य आकर्षण बनाउँदछ
बबूलबाट नावारिस चाकू होल्डर चुम्बकीय चाकू बोर्ड - चुम्बकीय चाकू ब्लक काठ चुम्बकीय धारक - चुम्बकीय चाकू ब्लक चक्कु धारक असम्बद्ध भूरा सूचक
डिजाईन एक्सेसरीजहरू: नावारिसले बबुलको काठबाट बनेको स्टाइलिश किचन चक्कु होल्डरहरूसँग, केवल भान्साकोठामा पनि अर्डर गरेन तर शैली। ब्लकमा एकीकृत चुम्बकीय स्ट्रिप्सको लागि धन्यवाद, शेफको चक्कु वा कैंची ह्यान्डलको नजिक स्पष्ट रूपमा देखिने छन्।
स्ट्यान्ड्स एक रूखको रूख: स्टेनलेस स्टीलको बनेको न्यूनतम खुट्टाले काठ चाकूको खण्ड दृढतापूर्वक सेट भएको सुनिश्चित गर्दछ। होल्डरलाई सुख्खा वा थोरै नम कपडाले सफा गर्नुहोस्। डिशवाशर सुरक्षित छैन!
अधिक ठाउँ: 27,7 x 27,5 सेमीको आकारको साथ, चुम्बकीय चाकू ब्लकले कटलरी, स्टेक चाकू र केक चक्कुहरूको लागि प्रशस्त ठाउँ प्रदान गर्दछ। स्ट्यान्डको गहिराई 12 सेमी हो। चक्कु ब्लक चुम्बकीय उत्पादनहरूको लागि मात्र उपयुक्त छ।
अद्वितीय: चुम्बकीय चक्कु होल्डर एक प्राकृतिक उत्पाद हो, प्रत्येक नमूना काठ को अन्न को कारण अद्वितीय हो। तपाईंको डेस्कटपमा अधिक व्यक्तित्व!
KNIFE STAND PLUS: वैकल्पिक रूपमा, तपाईं सुन्दर कुञ्जी धारकको रूपमा काठ चाकू ब्लक पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।
क्लारस्टेन कितानो - चाकू सेट, चाकू ब्लक, एक्सएनयूएमएक्स-पार्ट्स, प्रेसिजन ब्लेड, स्टेनलेस स्टील, वुड ब्लक, कालो सूचक
एक फ्रीज ईस्ट: क्ल्लारस्टेनले सेट गरेको आठ-भाग कितानो चाकूले सुदूर पूर्वी खाना पकाउने दर्शनलाई घरको भान्छामा ल्याउँदछ। ताजा सामग्रीहरूको उच्चतम आनन्दको लागि उच्च गुणवत्ताको चक्कुहरूको साथ उत्तम तयारी आवश्यक पर्दछ।
विभिन्न आकारहरू: कडा ब्लेड स्टीलबाट बनेका सात विभिन्न ब्लेड आकार काट्न, भर्ने, तौल र कतरनको लागि उत्तम उपकरण हुन्। सटीक ब्लेडहरू तिनीहरूको हल्का वजन र एर्गोनोमिक ह्यान्डलहरूसँग प्रभावित गर्दछन्।
इलेगन्ट डिजाईन: म्याट कालो क्लेरस्टाइन काठ ब्लकको पातलो आकारले थोरै ठाउँ लिन्छ र यसको न्यूनतम डिजाइनले प्रभावित गर्दछ। Plexiglas शीर्षमा कभर र मार्गनिर्देशित स्लटहरू ब्लेडहरूलाई सुरक्षा प्रदान गर्दछ।
सजिलो केयर र शल्य चिकित्सा: प्रयोग पछि, पानी र कपडा सफा गरेर, चक्कु खण्डमा छुरीहरू अर्को प्रयोगको लागि पर्खन्छन्। चक्कु ब्लकको तल स्लटहरूले ओसिलो छुट्न र ब्याक्टेरियाको गठन रोक्न अनुमति दिन्छ।
गुणवत्ता: 2008 घरेलू सामानको दुनियालाई उल्टो बनाउन थाल्छ। यसैबीच, उच्च-गुणवत्ता सामग्री, आधुनिक डिजाइन र एक अन्तर्क्रियात्मक समुदाय अनुप्रयोगको मिक्सले धेरै शौक कुकहरूलाई प्रेरित गर्दछ।
घरजग्गा चाकू ब्लक सेट, पाक्का काठबाट बनाएको ergonomic ह्यान्डलसँग व्यावसायिक चाकू सेट, अतिरिक्त तेज जर्मन स्टेनलेस स्टील 1.4116 भान्सा चाकू काठ ब्लक, 8-teiliges एन्जाइज
केईफेट सेट गर्दै: चाकू सेटमा शेफको चाकू, मासु चाकू, रोटी चाकू, पर्दा चाकू, भान्सा कैंची, चाकू तीव्र बनाउने, बोक्ने चाकू र काठको ब्लक
कुनै पनि RUST: चूंकि जर्मन स्टेनलेस स्टील 1.4116 बाट चाकू छ, जसमा 15% क्रोमियम (क्रोमियम ट्रेस तत्व हो, चाकूको कठोरता निर्धारण गर्दछ), यो उत्कृष्ट जंग र ओक्सीकरण प्रतिरोध छ।
सुपररियर SHARP: चाँहि तीव्र हुनु हुँदैन यदि भौतिक र फोहोरको कारणले गर्दा हाम्रो चाकू ब्लेड 14-16 डिग्री प्रतिमा, ध्रुवीय-विकर्ण र सटीक स्वभावमा हात-पोलिश गरिएको किनाराहरूद्वारा जाली गरिन्छ। यही कारणले हाम्रो चाकू त्यसभन्दा तेज छ
स्ट्याम्प गर्न सजिलो छैन: चाहे ब्लेड डिल गरिएको छ भने, सामग्री कठोरतामा निर्भर गर्दछ। हाम्रो चाकू जर्मन स्टेनलेस स्टील 1.4116 बाट बनाइएको छ, जसको कठोरता HRC57 भन्दा माथि छ, त्यसैले हाम्रो चाकू सजिलो छैन
सम्भावित होल्डिंग: पक्की काठको बनाइएको ergonomic ह्यान्डल, आरामदायक र टिकाऊ छ। तपाईं थकित महसुस गर्नुहुँदैन यदि तपाईं लामो समयको लागि चाकू राख्नुहुन्छ भने
SILBERTHAL सार्वभौमिक चाकू ब्लक - हटाउन योग्य ब्रिस्टल सम्मिलित - चक्कु बिना - स्टेनलेस स्टीलको औठीको साथ चक्कु भण्डारण - कालो प्रदर्शन
डिजाईन: किचनमा चाकूको सुरुचिपूर्ण भण्डारण कालोमा गोलो खण्डमा स्टेनलेस स्टीलले बनेको सुरुचिपूर्ण औंठीको साथ। प्लास्टिकको टीपीआर कोटिंगले ब्लकलाई मख़मली, म्याट फिनिश दिइन्छ।
युनिभर्सल: चाकू ब्लकमा अधिक चम्चा, कैंची वा तीखो स्टिलको लागि अधिकतम २० सेन्टीमिटर लम्बाइका साथ ठाउँ हुन्छ जुन परिवर्तनशील प्लास्टिक फाइबर र २२ सेन्टीमिटरको उचाई र ११ सेन्टीमिटर व्यास हुन्छ।
स्थिर: ११1140० ग्रामको विशाल र स्थिर तौलको साथ, ब्लक पर्ची बिना सुरक्षित ठाउँमा रहन्छ। थप रूपमा, चाकू ब्लकमा एन्टि-पर्ची तल छ।
सफा गर्न सजिलो: ब्रिस्टलहरू चक्कु ब्लक सफा गर्नका लागि हटाउन सकिन्छ।
चक्कु बिना: चक्कु ब्लक खाली वितरित छ।
एसनमस नाइफ ब्लक, स्टेनलेस स्टील ब्लेड र एर्गोनोमिक एबीएस ह्यान्डलको साथ चाकू सेट, अतिरिक्त शार्प स्टेनलेस स्टील शेफ चाकू सेट लकड़ीको ब्लाक संग, एक्सएनयूएमएक्स चाकू ब्लक सेट सूचक
15-टुक्रा चक्कु: 8 "सेफ चक्कु, 8" मासु चक्कु, 8 "रोटी चक्कु, 7" Santoku चक्कु,5"उपयोगिता चक्कु, 3.5" प्रदर्शनी यात्रा peeling,6x 4,5 "स्टेक चक्कु, 8" sharpening स्टील, 5.5 "कुखुरा shears, काठ ब्लक
तीव्र ब्लेड: प्रत्याभूति सटीक विशेष स्टेनलेस स्टील ब्लेड तीव्रता नयाँ प्रविधि संग परम्परागत प्रक्रिया फोर्जिंग को संयोजन, लोच र स्थायित्व
Ergonomic ह्यान्डल: Ergonomically आकारको प्लास्टिक ह्यान्डल र आदर्श सन्तुलित ब्लेड र सहज ह्यान्डलिङ, आराम, बल र स्थिरता लागि जानिन्छ लागि वजन ह्यान्डल
सुरक्षित भण्डारण: रासायनिक छाप बिना प्राकृतिक काठ बनेको चक्कु ब्लक जीवाणुहरू-मुक्त, प्राकृतिक र खाना सुरक्षित, त्यसैले यी चक्कु लामो जीवन
गुणवत्ता ग्यारेन्टी: 100% नयाँ 30-दिनको साथ, बिना शर्त पैसा फिर्ता ग्यारेन्टी र2वर्ष वारंटी, ग्राहक सेवाको 24 घण्टा।
AmazonBasics प्रीमियम चाकू ब्लक,9टुक्रा सेट सूचक
9 8 चाकू संग सेट: शेफको चक्कु (20,3 सेमी), santoku चाकू (20,3 सेमी), नक्काशी चक्कु (17,8 सेमी), रोटी चाकू (20,3 सेमी), बोनिंग चाकू (15,2 सेमी), उपयोगि चाकू (12,7 सेमी), पेरींग चाकू (8,9 सेमी), चाकू शार्पनर (20,3 सेमी) र 1 चाकू ब्लक
प्रेसिजन-हनेड स्टेनलेस स्टील ब्लेडहरूले दीर्घकालीन चिरस्थायीपनको ग्यारेन्टी गर्दछ
पूर्ण आकारको3रिभेट निर्माणले सन्तुलन र नियन्त्रण प्रदान गर्दछ
एर्गोनोमिक ह्यान्डलहरू सहज र सुरक्षित हातमा छन्
केवल हात धुने।
बांसबाट बनेको दुवै पक्षमा नवारिस चक्कु होल्डर चुम्बकीय - चुम्बक चाकू ब्लक छुरी बोर्ड दुबै छेउमा चुम्बक होल्डर - चाकू होल्डरलाई पुन: एकत्रित गरियो
डिजाईन एक्सेसरीजहरू: नावारिसबाट बाँसबाट बनेको स्टाइलिश भान्सा चक्कु होल्डरले भान्साकोठामा मात्र शैली ल्याउँदैन, तर शैली पनि। ब्लकमा एकीकृत चुम्बकीय स्ट्रिपलाई धन्यवाद, शेफको चक्कु वा कैंची ह्यान्डलको सहज पहुँचमा राखिन्छ।
स्ट्यान्ड्स एक रूचि जस्तै: न्यूनतम स्टेनलेस स्टीलको खुट्टाले काठको छुरी ब्लक स्थिर रूपमा खडा छ भनेर सुनिश्चित गर्दछ। होल्डरलाई सुख्खा वा थोरै नम कपडाले सफा गर्नुहोस्। डिशवाशर सुरक्षित छैन!
अधिक ठाउँ: चुम्बकीय चाकू ब्लक दुबै पक्षमा चुम्बकीय छ र त्यसैले कटलरी, स्टेक चाकू र केक छुरीहरूको लागि दुगुना ठाउँ प्रदान गर्दछ। उही समयमा, तपाईंसँग भान्साकोठामा अधिक ठाउँ छ। चुम्बकीय उत्पादनहरूका लागि मात्र उपयुक्त!
अद्वितीय: चुम्बकीय चक्कु होल्डर एक प्राकृतिक उत्पाद हो, प्रत्येक नमूना अन्न को कारण अद्वितीय हो। तपाईंको कामको सतहमा बढी व्यक्तित्व!
KNIFE STAND PLUS: वैकल्पिक रूपमा, तपाईं काठको चाकू ब्लकलाई सुरुचिपूर्ण कुञ्जी होल्डरको रूपमा प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।
एक साधारण डिजाइन 22 सेमी उचाई मा यूनिभर्सल चक्कु ब्लक, Mac हटाउन योग्य प्लास्टिक सम्मिलित DXplay साथ 11 सेमी कालो
यूनिभर्सल चक्कु ब्लक 22 सेमी उच्च, design 11 सेमी एक साधारण डिजाइन र हटाउन योग्य कुन्स्टोफिन्सैत्जमा
1100g को एक विशाल र स्थिर वजनको साथ, ब्लक ठाउँमा सुरक्षित रूपमा रहन्छ। तपाइँको छुरीहरू क्रमबद्ध गर्नुहोस् र तिनीहरूलाई सुरक्षित र पहुँच भित्र राख्नुहोस्। दराजमा दाँया चक्कुको लागि कुनै खोजी छैन
यो7चाकू सम्म फिट हुन्छ 24 सेमीको लम्बाइमा चक्कु ब्लकमा, तपाईंको भान्साको भाँडाहरूका लागि पनि
अर्को लेखइलेक्ट्रिक रोटरी टूथब्रश